भेटरीनरी अस्पताल कास्कीको ९ करोड ३२ लाखको कार्यक्रम सार्वजनिक–Samacharpati
पोखरा, ११ असाेज । भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र कास्कीले पुराना कामलाई प्राथमिकता दिदैं नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सहित आ.व. २०७७÷२०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रले २०७७÷०७८ मा ९ करोड ३२ लाख ५१ हजारको वजेट सार्वजनिक गरेको छ । वजेटमा पुंजिगत खर्च कार्यक्रममा २ करोड २७ लाख ६० हजार र चालु तर्फ ७ करोड ४ लाख ९१ हजार खर्च गर्ने कार्यलय प्रमुख डा. शोभा शर्माले वताउनु भएको छ ।
गत आव २०७६÷०७७ मा सो भेटरीनरी हस्पिटलले ९७.४९ प्रतिशत भारित प्रगति र ९५.०७ बित्तिय प्रगति भएको समेत जानकारी गराइएको थियो ।